Mpampianatra mitokona : Norarafan’ny MAPAR baomba lakrimôzena -
AccueilRaharaham-pirenenaMpampianatra mitokona : Norarafan’ny MAPAR baomba lakrimôzena
06/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
« Ny vava no tsy atao be », hoy ny fomba fitenenana izay. Tena mendrika ho an’ireto MAPAR ireto mihitsy izany fitenenana izany ankehitriny, satria izy ireo izao no mandrafitra ny governemanta. Praiminisitra MAPAR tokoa mantsy ankehitriny no lehiben’ny governemanta sady lehiben’ny OMC. Izany hoe, eo ambany fiahian’ny praiminisitra ny EMMO.Nat sy ny EMMO.Reg, ary avy aminy avokoa ny baiko rehetra.
Nanohy ny fitokonany tetsy anoloan’ny minisiteran’ny Fampianarana indray mantsy omaly ireo mpampianatra. Marihina avy hatrany fa ireo MAPAR tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai no nitarika ny sendika, ny mpampianatra, ny mpianatra ary ny mpiasam-panjakana rehetra hitokona, handrodana ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina. Nandeha nitety minisitera sy sekolim-panjakana mihitsy izy ireo taorian’ny fahavakisan’ny kianjan’ny 13 Mai ny faha-21 Aprily 2018.
Nivoaka ny fianarana tokoa ireo mpianatra tany amin’ny sekolim-panjakana, nisy tamin’ireo mpiasam-panjakana ihany koa ny nanara-dia izany ka isan’ireny ny mpampianatra. Tsy nitsahatra nampirisika sy niantso ny rehetra handao ny toeram-piasany ny MAPAR sy ny TIM, ary nisy mihitsy aza ny fandrahonana mivantana sy an-kolaka.
Nivadika anefa ny raharaha ankehitriny satria dia baomba mandatsa-dranomaso sisa ilay fampanantenana nataon’ny MAPAR tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Norarafan’ny MAPAR lakrimôzena ireo mpampianatra mitokona satria manelingelina ny governemanta izay tantanin’izy ireo. Tsy afaka ny handà mihitsy ny MAPAR eo anatrehan’izany resaka izany, satria azy ireo io praiminisitra, Ntsay Christian io. Praiminisitra MAPAR no lehiben’ny governemanta, ary maro tamin’ireo MAPAR nitarika grevy tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai no lasa minisitra, raha tsy hiresaka afa-tsy Augustin Andriamananoro, Christine Razanamahasoa, Pierre Houlder, Brunelle Razafitsiandraofa, sns.
Koa maninona ankehitriny no tsy mitabataba ilay hoe fahalalahana maneho hevitra sy zo amin’ny fitokonana ry MAPAR sy ny TIM? Mpampianatra mampalahelo kely nofitahanareo ireo ve dia lakrimôzena no sahaza azy rehefa nahazo fanjakana ianareo?
Na dia eo aza ny fankatoavan’ireo mpitsara sasany ny baiko izay omen’ny sendikà, dia nivoaka tamin’ny fahanginany kosa omaly ireo mpitsara tsy mankatoa ny fikomiana tanterahin’ ireo namany. Nambaran’ity fikambanana ity tamin’ny alalan’ny mpitondra teniny ...Tohiny